Sidee baan uu takhtarka aado? Macluumaad loogu talagalay qaxootiga iyo doolka. | Refugee Center Online
Sidee si ay u tagaan dhakhtarka. Warbixin ku saabsan ballan dhakhtar oo la hadlaya dhakhtarkaaga.
Sidoo kale waxaad ka eegi kartaa database RCO ee daryeel caafimaad bixiyayaasha ee magaalada aad ku. Qaar badan oo ka mid ah bixiyeyaasha, kuwaas oo ay bixiyaan adeegyo loogu talogalay qaxootiga iyo dadka kale ee iyo dadka aan caymiska.
Haddii aad leedahay xaalad degdeg ah oo nolosha halis, waa in aad u tagto waaxda gargaarka degdegga isbitaalka agtaada ah ee.
Wixii arimo caafimaad oo aan laakiin waxaad weli u baahan dhakhtar xaaladaha degdegga ah, waxaad tagi kartaa daryeel degdeg ah oo soco-in rugaha. Kuwani waxay inta badan saacadaha habeenkii iyo weekend, la siiyo daryeel ballan la'aan.
Sidee ayaan u soo booqdaan dhakhtarka?
Dooro bixiyaha daryeelka aasaasiga ah. Tani waxay noqon doontaa dhakhtarka ugu weyn oo qofka ugu horreeya ee aad caadi ahaan u tagaa marka hore haddii aad xanuunsato.
Haddii aad qabto aragto dhakhtar cusub, loo hubiyo in ay ku network caymiska si aad caymiska bixin doonto booqashada. Tani waxay kaa caawin doontaa in aad si looga fogaado in la helo biil badan oo boostada in aadan ka filan.
Soo qaado kaarka caymiska si aad u ballan kasta oo caafimaad ama booqo farmashiyaha.
Haddii aad qaadato daawooyinka, had iyo jeer keenaan liis ay magacyadii reer binu dawooyinka aad qaadato.